Video: Gabar Shan sano la qabey oo weli bikro ah iyo sida ay ku dhacdey - iftineducation.com
iftineducation.com – Mid ka mid ah qisooyinkii ugu yaabka badnaa ayaa laga daawadey Telefishinka Carbeed ee caanka ah ee MBC kadib markii haweeney ay soo wacdey daadihiye Barnaamij talo siin ah.
Gabadha lasoo xiriirtay Barnaamijka MBC ayaa ka dhawaajisay in ay tahay Haweeneey Shan sano la qabey, balse weli bikro ah oo aan loo galmoon.
Sida ay haweeneydan sheegeyso, Ninkeedu waxa uu marwalba isku dayey in uu calaaqo Jinsi ah la sameeyo xaaskiisa, balse waa ay ka diidaa, ayadoon aqoon sababta ku kalifeysa sida ay sheegeyso. Waxaa kaloo
haweeyneydan oo qisadeeda lala yaabey ay intaas ku dartey in ay culimo badan u tagtey si loola taliyo isla markaana ay u aqbasho in Ninkoodu xiriir golol la sameeyo, balse culimada ayaa u
sheegay in ay u tagto dhaqtar si qalliin bikro jabin ah loogu sameeyo si ay arrintu ugu fududaato, balse arrintaasina wey ka diiday. Hadaba Telefishinka MBC ayey lasoo xiriirtay ayadoo si yaab leh uga sheekeyneysa